Shina : Mampiahiahy ny fiverenan’ny Maoïsta Nandritra ny Fihetsiketsehana Manohitra ny Japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2012 10:44 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Mpanao fihetsiketsehana maoïsta no nibaha-toerana nandritra ny hetsika goavana manohitra ny japoney izay nitranga tao Shina tamin’ny 15 hatramin’ny 18 septembra 2012, nisy ny filanjana ny saritavan’ny filoha Mao nandritra ny filaharambe sy ny fiventsona ny hira taloha ho fanomezam-boninahitra ny mpanorina ny firenena.
Ho an’ireo manampahaizana marobe, mampanembona ny fahatsiarovana mangidy mikasika ny fampielezan-kevitra sy ireo andianà raharaham-pitsarana politika ny fiverenan’ireo maoïsta eo amin’ny tontolo politika, tahaka ny Revolisiona koltoraly, izay nampisongadina ny tantaran’ny Sinoa. Izany indrindra no antony nahasarika manokana ireo mpampiasa ny sehatra bilaogy madinika tamin’ny herisetra nataon’ilay profesora maoista Han Deqiang taminà rangahy 80 taona nandritra ny fihetsiketsehana manohitra ny japoney tao Beijing tamin’ny 18 septambra.
Maoïsta avy ao amin’ny ankavia nandritra ny fihetsiketsehana manohitra ny japoney
Tao amin’ny bilaoginy, Lao Ye naneho hevitra [amin’ny teny sinoa] mikasika ny fiverenan’ireo maoïsta nandritra ny famoriam-bahoaka manohitra ny japoney tao Beijing :
[Manomboka amin’ny “Manao ahoana, Xiaoping” sy ny “Filoha Mao, malahelo anao ny vahoaka] Tamin’ny 18 septambra tao Beijing, mpianatra marobe sy mpanao fihetsiketsehana no nanatontosa filaharambe ary nilanja sarintava sy teny filamatry Mao. Hoy ny iray amin’ireo sora-baventin’ny mpianatra milaza “Filoha Mao, malahelo anao ny vahoaka ». Tamin’ny taona 1984, toy izao ny teny filamatry ny mpianatra “Manao ahoana, Xiaoping”, teny fohy maneho fa mandalo vanim-potoana vaovao eo amin’ny tantarantsika isika [miaraka amin’ny fanovana ara-toekarena]. Saingy ankehitriny, tsy misy olona milanja sarintava sy teny filamatry Deng Xiaoping intsony. Fivoarana tokony marihana.
Nisy ny sampona niseho nandritra ny filaharambe tao Beijing. Raha niventso ny teny filamatra “Filoha Mao, malahelo anao ny vahoaka!” ny vondrona iray, mpanao fihetsiketsehana iray manohitra ny japoney namaly azy ireo mafy hoe: “malahelo azy ny vodiko!”.
Novelesin’iray tamin’ireo mpanao fihetsiketsehana izy avy eo no sady notebahany hoe “mpamadika”. Bilaogera iray nanamarika [amin’ny teny sinoa] fa i Han Deqiang [amin’ny teny anglisy] ilay olona nihantsy, nasionalista sinoa malaza sy mpamorona ny tranokala maoïsta “Utopia“, izay mampianatra ao amin’ny oniversité Beihang ao Pékin.
Taty aoriana, nandefa fanambarana tamin’ny aterineto [amin’ny teny sinoa] tamin’ny fomba feno fihantsiana i Han izay niparitaka be tamin’ny bilaogy sy forum (fifanakalozan-keivtra) avy eo:
Manohitra ny herisetra foana aho hatrizay ary manohana ny fifampiresahana marina. Saingy raha mifanehatra amin’ny olona tsy manantsaina, olona manevateva ny mpamorona ny firenentsika, mampidi-doza ny firaisain’ny vahoaka sinoa sy manome vahana ny Japoney ho toy ny mpamadika, tsy zakako izany. Aleoko izaho no samborina toy izay mamela ny mpamadika tahaka azy hihira ratsy toy izany. Tsy azo leferina ny teny toy izany ao anatin’ny fihetsiketsehana manohitra ny Japoney sy ny fanomezam-boninahitra ho fahatsiarovana ny filoha Mao. Raha mbola mifanena aminy aho amin’ny fihetsiketsehana manaraka, dia haveriko indray ny nataoko. Nandika lalàna aho, vonona hizaka izay vokatr’izany aho. Ary tsy hifona izany mihitsy aho mandrakizay.
Tamin’ny fomba mahagaga, mpiserasera maromaro no naneho ny fanohanany an’i Han [amin’ny teny sinoa] :
Zhang Hongliang : [Manohana ny fihetsiky Han Deqiang, vonona hanafika ireo mpamadika] Manan-jo hiaro ny fahalalahany ara-pivavahana ny firenena tsirairay. Niteraka fahatezerana manohitra ny Amerikana manerana izao tontolo izao ilay horonantsary amerikana manevateva ny finoana miozolomana. Nahoana i Shina no firenena tokana tsy manana fahalalahana ara-pivavahana? Nahoana isika no tsy manana fahalalahana hatoky ny filoha Mao? Sy ny zo hiaro ny finoantsika? Nahoana ny lalàna no manome fahafahana ny tsirairay hanevateva ny filoha Mao? Kanefa ny vahoaka tsy manan-jo ara-dalàna hiaro ny finoany manokana?
Tianma101 : Ny onja mena no nandrava ny teti-dratsy nokasaina hanova an’i Shina. Nikasa hanafatra lohataona Arabo ho an’ny firenena i Etazonia sy ireo sinoa andevony, saingy nalemy tampoka ireo mpanohitra ny revolisionera raha nahita ny fibosehan’ireo maoista marobe. Tsy misy azony atao manoloana ireo vahoaka toy ny vitsika, nanangana ny lohataonany manokana ny vahoaka! Mazava ho azy fa mety hitarika ny manampahefana avy any ivelany hanombana indray ny herin’ireo andevony sinoa izany!
Wang Hailin : Raha ny tena marina, nofaizina imbetsaka sy niharan’ny sivana ny foto-kevitra maoïsta tao anatin’izay taona vitsy lasa izay. Hetsika feno herim-po tanteraka ny fanaovana famoriam-bahoaka an-kalamanjana, raha misy ny fotoana ahafahana manao izany haingana. Fomba mahomby kokoa ny fanehoan-kevitra eny an-dalambe noho ny adihevitra tsotsotra resahina amin’ny aterineto.
mazava loatra fa marobe ihany koa ireo fihetsika manohitra ny maoista amin’ny alalan’ny fihantsiana. Indreto fanehoan-kevitra nofantenina izay somary manalasala: [amin’ny teny sinoa] :
Fan Xiaoyang : Raha oharina amin’ny fahasimbana ateraky ny fibaikoa-miaramila japoney, ny fahasimbana nateraky ny maoista ankavia tao Shina no goavana kokoa. Aleo fantarina tsara izany.
Berlin2011 : Tamin’ny fitantanan’i Mao, mampahonena ny fitotongan’ny haranitan-tsaina sy ny fitondratenan’ny mponina, ary koa ny sivilizasiôna eo amin’ny fiarahamonina sinoa. Azo lazaina ihany koa fa niditra tanatinà vanim-potoana maizina feno faharatsiana isika. Tao anatin’izay andro vitsy lasa izay, tsy nisy afa-tsy ny maoïsta tao amin’ny fihetsiketsehana. Na dia efa nohidiana matetika aza ny toerana Utopia, manana tombony lehibe ny mpanohana ny maoista ankavia eo amin’ny fahalalaham-pitenenana. Afaka miantso malalaka hamono ny andevo izy ireo, ary mikapoka olona eo imasom-bahoaka. Ho an’ny liberaly kosa, iharan’ny famoretana izy ireo ary tsy afaka maneho ny heviny amin’ny fomba mendrika eny an-dalambe.
Zhang Lifeng : [Tontolo iainana politika] Votsotra eo an-tanan'ny maiosta ankavia ny fahefana tamin’ity taona 2012 ity. Izany no mahatonga azy ireo mahery setra sy manao hetsika mahery vaika nefa maka an-jorony. Mety hiady an-trano ry zareo ireo ka hisy ny fisaraham-bazana.